Maraoka: Fiteny, Lahatsary Mozika, ary ny Fikarakarana “Hymen” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2017 3:17 GMT
Nanjary lohahevitra mafana ireo raki-kira Arabo raha narary ilay bilaogera Cat in Rabat ary voatery nijery fahitalavitra nandritra ny andro vitsivitsy. Nanoratra tsikera mahatalanjona momba ny lahatsary Libaney sy Ejiptiana mitondra ny lohateny hoe “Ahoana no hahatongavana ho Milionera” izy.
Rehefa nahita ireo horonantsary i Cat in Rabat dia nilaza hoe: “Mbola tsy nahita maso sangan'asa ara-javakanto mahavariana tahaka izao teo amin'ny fiainako aho, ny lahatsary tsirairay dia misy lalana tsy hita lany (labyrinth), toa saro-takarina, ary ahitana fihetseham-po maha olombelona mahery vaika izay manavatsava ny toeram-piainana maha olombelona mbola tsy nisy nahasahy niditra teo aloha. Moa ve i Peter Gabriel no tao ambadik'ireny? ” Avy eo izy namintina ny endrika ankapobeny izay toa arahin'ny lahatsarin-kira Arabo rehetra.
Bilaogera Cory Driver, Amerikanina mipetraka any Maraoka nizara tsiambaratelo ho valin'izany: “Tiako ny lahatsarin-kira Arabo. Miresaka bebe kokoa noho izay heverina. FITIAVANA. Manampy ahy hianatra teny Arabo izy ireny, ary anisan'ny kolontsaina azoko zaraina ny sasany amin'ny asa-tanako.”
Mikasika ny fiteny ihany, nibilaogy momba ny fitenin'i Maraoka i Everything Morocco tamin'ity herinandro ity tao anaty lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe “Ao Maraoka, milaza inona ianao?” Noresahana ny tantaran'ny fiteny sy ny fampiasana ny fiteny samihafa, mamintina i Everything Morocco hoe:
Angamba tantaran'izy ireo na ny fomba fiasan'ny atidohan'izy ireo na filàna fifandraisana fotsiny izany, saingy toa tapa-kevitra hianatra fiteny maro sy mampiasa azy ireo malalaka ny Maraokana. Tsy mamelona ireo fitsaratsaram-poana momba ny fiteny izy ireo na koa fieboeboana izay hita matetika amin'ny kolontsaina hafa ary vonona kokoa hanamora ny fifandraisana. Manome heviny vaovao amin'ny fomba fiteny mitady olona miteny ny fiteninao izany rehetra izany.
Taorian'ny famakiana lahatsoratra tao amin'ny Marock Magazine, forum antserasera Maraokana malaza nanontany hoe “Accepteriez vous se marier avec une meuf non vierge?” na “Manaiky hanambady sipa tsy virijiny ve ianao?”), izay namaly eny ny 74% n'ireo namaly, nahagaga ny fahitana lahatsoratr'i Myrtus mitondra ny lohateny hoe “Ny Ilaina “hymen” Miverina Amin'ny Toerany.”
Mamaly ny lahatsoratra ao amin'ny Reuters izay miresaka momba ny safidin'ilay vehivavy Maraokana 19 taona mba hamerenana ny “hymen”-ny amin'ny laoniny, manontany i Myrtus hoe: “Oh, misy ny toeram-pitsaboana manamboatra hymen ao Casablanca? Andeha ekena, ny tanora no manao izany. Ny tiako lazaina dia hoe, iza no mitady virjina efa 40 taona? Koa aoka isika hanontany tena … manana safidy firy ireo zatovovavy sy tanoravavy? “
Niombon-kevitra tamin'i Myrtus ny fomba fijerin'i taamarbuuta ao amin'ny The Morocco Report, ka hoy izy: “Azoko antoka fa azonao an-tsaina ny hevitro momba izany, fa raha ny marina … Hitako fa tena tsy misy dikany ny hoe tsy maintsy manao vivery ny ainy any amin'ny toeram-pitsaboana tsy ara-dalàna ny vehivavy iray, amin'izay afa-po ny maha lehilahin'ny vadin'izy ireo ho avy rehefa manao firaisana aminy voalohany ary mahita fa mandeha rà izy (saingy amin'ity tranga ity, satria nivoaka avy amin'ny fivaviany ny ratra tsy ara-pahasalamana). “
Farany, ary koa eo amin'ny asa ara-pitsaboana Maraokana. The View From Fez namoaka lahatsoratra mampihetsi-po, izay midera ny dokotera Maraokana noho ny valintenin'izy ireo haingana sy ny fikarakaràna tsara namana iray izay narary vao haingana. Milaza ny mpanoratra hoe: “Tena ilaina ny misaintsaina fa any amin'ny firenena lazaina fa mandroso, mety ho efa maty izy raha niandry fanampiana ara-pitsaboana.”